Iri Zuva Idzva kuUNWTO iGiant Danho rekufamba, Tourism, uye World Economy
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Wtn » Iri Zuva Idzva kuUNWTO iGiant Danho rekufamba, Tourism, uye World Economy
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • misangano • nhau • vanhu • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Wtn
Nhasi, nyika makumi masere neshanu dzavhotera Secretary-General weUNWTO Zurab Pololikashvili kuti asimbiswe kutungamira World Tourism Sangano kwemamwe makore 4.
Nhasi ranga ririwo zuva rekuti hapana nyika, hapana mumiriri, uye hapana wemukati achakwanisa kubvunza dare redziviriro iyi sezvo yanga yakanaka, yakavanzika, uye ine demokrasi. Nyika makumi maviri nepfumbamwe chete dzakavhotera kupokana nekusimbiswazve kwake.
Uku kwanga kusiri kuhwina kwaVaZurab Pololikashvili chete asiwo kwesangano rakabatana neUN, WTN Decency in Election ”mushandirapamwe, uye kune vaviri vaimbova Munyori Mukuru weUNWTO - Dr. Taleb Rifai naFrancesco Frangialli - avo vakanga varidza pachena mabhero ekubvunzurudza sarudzo yakarurama yesangano rimwechete ravakashanda kwemakore akawanda.
Mr. Pololikashvili akakunda sarudzo, uye gamba rakabuda.
Gamba musarudzo dzanhasi ndiMh. Gustav Segura Costa Sancho, Gurukota rezvekushanya kweCosta Rica, vakaita sarudzo yakanaka. Akamiririra Costa Rica, akakumbira vhoti yaidiwa yakavanzika kuti asimbise uye asimbise chero zvingave zvabuda mumaitiro anhasi. Pasina sarudzo yakavanzika, gore rakasviba rekunyengera ringadai rakaramba riri pamusoro pemaitiro aya kwemakore mana anotevera.
Chero kufungirwa kwehudzvinyiriri kwakadaro kwabva kwabviswa. Secretary-General mutemu yake yechipiri anogona kutarisa zvizere kutungamira kushanya kwenyika dzese dziri nhengo.
Haazove nechisungo chakakosha kunyika dziri mukanzuru. Hapazovi neimwe sarudzo. Nzvimbo yake zvino yakachengeteka uye yakasimbiswa kusvikira pakupera kwetemu yake yechipiri. Iye zvino anogona kutarisa kutungamira kushanya kwepasirese kuburikidza nematambudziko makuru ari kutarisana nechikamu ichi.
Uku ndiko kuhwina kwekushanya kwepasi rose.
Zvichabatsirawo Secretary-General kuvaka nhaka yake. Runyerekupe rwuri kuti hurongwa hwavo ndehwekukwikwidza chigaro chemutungamiri weGeorgia mushure mekunge temu yavo yeUNWTO yapera.
Saka nhasi raive zuva rekukunda / kuhwina / kuhwina kwekushanya kwepasirese. Iye zvino zvakakodzera kuti tisangokorokotedza Mr. Zurab Pololikashvili nekukunda sarudzo yakarurama uye yakavanzika, asi inguva yokuti munhu wose ari mukushanyira kwenyika yose ashande neUNWTO.
Munyika yevakundi, mune zvakare nyika yeavo vakaita zvisungo zvisina maturo. Nyika dzinosvika makumi matatu neshanu dzakasimbisa kuseri kwezviitiko kuita chimwe chiitiko, dzakaguma dzaita zvakapesana. Zvichida izvi zvinogona kunzi "zvematongerwo enyika," uye zvematongerwo enyika zvinosuruvarisa ZVINOGONA zvichibva pautsi uye zvipikirwa zvisina maturo. Izvi hazviratidzike kunge zvakasiyana muzvikamu zvakawanda, nyika, kana masangano.
Juergen Steinmetz we eTurboNews, uye chigaro che World Tourism Network, inzwa kuti mutoro mukuru wabviswa kubva muchikamu chekushanya nhasi. Yave nguva yekuisa misiyano uye kushoropodza kumashure kwedu uye nekubatsira UNWTO kuti irambe iri munzira kune zvakanaka zvekushanya kwenyika.
VaPololikashvili vakati: “Munharaunda yese yepasi rose, denda rakajekesa kukosha kwechikamu chedu - mukusimudzira hupfumi, kwemabasa nekutengeserana, uye kuchengetedza nhaka yechisikigo netsika. Isu tinofanirwa kushandisa zvakanyanya mukana uyu - kushandura kufarira kuve tsigiro chaiyo. "
Steinmetz akabvuma uye akapa Mr. Zurab Pololikashvili uye UNWTO kutsigira kwake kwakakwana uye kubatana.
"Kunyika zhinji dzinotsamira pakushanyirwa, kuva nezwi rakabatana pasi rose, uye zviitiko zvakarongeka zvinogona kuve danho rakakura kumberi kwehupfumi hwakadai", Steinmetz akapedzisa.